कक्षा १२ को परीक्षा साउन ३१ गतेदेखि शुरु हुने (तालिका सहित ) - Akhabarpati.com
कक्षा १२ को परीक्षा साउन ३१ गतेदेखि शुरु हुने (तालिका सहित )
५ साउन, काठमाडौं – कक्षा १२ को परीक्षा साउन ३१ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ ।मंगलबार बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साउन ३१ गतेबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको परीक्षा उपनियन्त्रक सुवास पन्तले जानकारी दिए ।
‘परीक्षा सञ्चालन सहमतिका निम्ति मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’ बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले भने, ‘सहमति आइसकेको छैन । तर पनि साउनको तेस्रो सातापछि सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं । त्यसैअनुसार विद्यार्थी ढुक्क भएर तयारी गर्न सक्छन् ।’
गत जेठ २६ गते तय भएको परीक्षा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको तीव्र गतिमा फैलन थालेपछि स्थगित भएको थियो । यस पटक तीन लाख ८६ हजार विद्यार्थीले परीक्षा फाराम भरेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले जनाएको छ ।वैशाखमा सम्पन्न हुनुपर्ने परीक्षा कोभिड–१९ महामारी दोस्रो लहर फैलिएपछि चार महिना पछाडि सरेको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् …. नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले एक/दुई दिनमै सरकारमा जाने तयारी गरेको छ।
नेपाल निकट सांसद मेटमणि चौधरीले आफूहरु सरकारमा सहभागी हुने बताएका हुन्। उनले अबको एक/दुई दिनमै सरकारमा सहभागि हुने थाहाखबरलाई जानकारी दिए। उनकाअनुसार नेपाल समूहलाई ६ वटा मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि कुन–कुन मन्त्रालय दिने भन्ने बारेमा टुंगो लागेको छैन।
उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ जना सांसद अहिले छलफलमा जुट्दै छन्। बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा आज अपरान्ह ४ बजे बैठक बस्न लागेको हो।
बैठकमा सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा छलफल गरिने ती नेताले जानकारी दिए। आज बिहानमात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले नेता नेपाललाई भेटेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।
उनीहरुबीच साझा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालन गर्ने बारेमा समेत छलफल भएको थियो। उक्त विषयमा प्रचण्डले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेका थिए।
नेपाल समूह पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पनि छलफल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा निकट एक नेताका अनुसार यसबारेमा छलफल चलिरहेको तर निर्णय हुन सकेको छैन्।
गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागवण्डा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सकस देखिएको छ। एउटै दलभित्रका फरक–फरक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने र नेताहरूले आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या देखाएर मन्त्रालयको संख्यामा बार्गेनिङ गर्न थालेपछि सकस परेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाई छ।
नेपाली कांग्रेस भित्रैबाट पनि रामचन्द्र पौडेल पक्षले उपप्रधानमन्त्री आफ्नै पक्षले पाउनुपर्ने अडान राखेपछि देउवालाई थप सकस देखिएको हो। देउवालाई ओली पक्षका आठ र नेपाल पक्षका १४ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए।
शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त
प्रा.स. का लागि अति सम्भावित प्रश्न उत्तर सेट – ५ , शेयर गरि सुरक्षित राख्नुहोस्
ब्याचलर प्रथम बर्षको परिक्षा अब तपाई बस्नुभएको घर नजिकैको सेन्टरबाट